काठमाडौँ ।हास्य टेलिश्रृङ्खला भद्रगोल बाट आफ्नो नाम दर्शक सामु चिनाउन सफल भएकी एक पात्र हुन् रक्षा श्रेष्ठ (रक्षा) । हास्य टेलिसियलमा अभिनय गरी चर्चामा आएकी रक्षाको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । रक्षाले केही फिचर फिल्ममा समेत काम गरिसकेकी छिन् । पछिल्लो समय नयाँ हास्य टेलिसिरियल ‘सक्कीगोनी’मा पनी कलाकार कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ संग रक्षाको जोडी देख्न सकिन्छ । रक्षाले भनिन् ‘दर्शकहरूले जिग्रिको प्रेमीकाको रूपमा चिन्दा खुसी लाग्छ’ । उनको सौन्दर्यता मा झन् झन् निखार आएको दर्शकहरू बताउँछन् । टेलिश्रृङ्खलाको साथै विभिन्न कम्पनीको विज्ञापनमा समेत उनको उपस्थिति बाक्लिँदो छ ।…
काठमाडौँ । धेरै जसो नेपाली मिडियामा बलिउड/हलिउडमा हुने डि’भोर्सका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढे सँगै नेपाली सेलिब्रेटिहरूको डि*भोर्सले पनि निकै चर्चा पाउन थालेको छ । उनीहरूको रिल लाइफमा जस्तो सुकै भूमिकामा देखिएपनी रियल लाइफमा जो कोही आफ्नो सम्बन्धबाट टाढिन चाहिरहेको हुँदैन । तर भने जस्तो कसको पो हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाली स्रेलिब्रेटीको पनि विवाह भएको केही समयमै डि*भोर्सका खबरहरू सुन्नमा आएका हुन्छन् । तर तर, केही जोडी भने उदाहरणीय पनि बनेका छन् । आउनुहोस् हेरौँ डि*भोर्सका कारण चर्चामा रहेका केही नेपाली…
काठमाडौँ, २ कात्तिक । पूर्व अधि राजकुमारी पूर्णिकाले ए’सिड आक्र’मण पी’डित मुस्कान खातुनको स्वा’स्थ्य लाभको कामना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेखेकी छिन् । पूर्णिका शाह परोपकारी कार्य र समाजसेवामा सक्रिय छिन् । उनी साहित्य र कलामा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । समाजमा घटित घटनाबारे तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्छिन् । पूर्णिका शाहले सामाजिक सञ्जालमा ए’सिड पी’डित मुस्कान खातुनप्रति सहानुभूति जनाउँदै धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले नारीको अपमान भएको भन्दै आ’लोचना समेत गरेकी छिन् । पूर्णिकाले लेखेकी छिन्- हाँस्छन् नारी जब जबयहाँ हाँस्छ यो सृष्टि आफै रुन्छन् नारी जब जब यहाँ…
एजेन्सी : मानिसहरुले पैसाको लागि के सम्म गरेका हुदैनन् तर पनि उनीहरुले भनेजस्तो कमाई गर्न सकेका हुदैनन !आफ्नो घर गाउ देश छोडेर अन्य देशहरुमा पुग्छन युवाहरु तर त्यहा पुगेर पनि उनीहरुले दुख मात्र पाएका हुन्छन ! मानिसहरुले दिन रात खुन पसिना गरेर पनि कमाउन नसक्ने पैसा एक युवतीले एकै घन्टामा लाखौ कमाउछिन ! अष्ट्रेलियन एक चेल्सिया नाम गरेकी युवतीले घर बसिबसी करोडौं कमाइरहेकी छन् । उनको नोकरी थाहा पाउँदा मानिसहरु अचम्मित हुन्छन् । उनको नोकरी निकै आरामदायी छ, मात्र उनले केही घन्टामा निकै पैसा पाउँछिन् । चेल्सियालाई प्रत्यक्ष हेर्नका लागि…
एजेन्सी । कसरी हुन्छ मृर्गौला फेल? चिकित्सकहरूका अनुसार मृर्गौला धेरै जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक अौषधीको प्रयोगले पनि फेल हुने उदाहरणहरू थुप्रै छन् । आयुर्वेदिक अौषधीको सेवनले कुनै किसिमको प्रतीअसर गर्दैन भन्ने कुरा भ्रमपुर्ण रहेको चिकित्सकहरू दाबी समेत गर्छन् । कतिपय आयुर्वेदिक अौषधीकै कारण मिर्गौला फेल हुन गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यी बाहेक, ‘क्याडवियम’, मर्करी, ‘लेड’जस्ता गह्रुँगा धातुले पनि मिर्गौला फेल गराउन सक्छन् । मृगौला फेल हुने कारण वंशाणुगत मधुमेह उच्च रक्तचाप पिसाब सम्बन्धी समस्या पाठेघर खस्नु मृगौलामा पत्थरी, ट्युमर प्रोस्टेटको आकारमा बृद्धि जन्मजात पिसाब नलीमा खराबी रगतमा दूषित पदार्थको प्रवा लामो…
काठमाडौँ २ कार्तिक । ‘कृष्ण रूपा’ निकै चर्चित जोडी हुन् । आज ‘रूपा मगर वलि’को जन्मदिन परेको छ । ‘माया शब्द मात्र दुई अक्षरले बनेको छ । जुन सुन्नमा जति सरल र सहज छ उति नै गहिराइ पनि तिनीहरूको लागी जो असल प्रेमी प्रेमीका हुन्छन् । त्यस्तै एउटा निस्स्वार्थ अनि अमर माया प्रेमको कहानी कुनै दिन स्वयंम पढेको थिए, जो रहेको थियो “मुनामदन” त्यस्तै आज वास्तविक अनि यथार्थ मै देख्न पुगे अर्को प्रेम कथा “कृष्ण वलि र रुपा मगर”को, मुनामदन एक काल्पनिक प्रेम कहानी भएता पनि तर यथार्थमा उनीहरू भन्दा…
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा बिस्तारै बिस्तारै गर्मि बढ्दै गएको छ ! समर सिजन सुरु भएसँगै दिन प्रतिदिन गर्मि महसुस हुन थालेको छ ! गर्मि महिना मा चिसो पानि मा गएर पौडिनु हो मजा नै छुट्टै आनन्ददायी हुन्छ ! तर अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर ज्यान गुमाउने को संख्या पनि बढ्दै गैरहेको छ ! त्यसकारण पौडी खेल्ने क्रममा सतर्कता अपनाउनु जरुरि हुन्छ ! तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो वर्ष मात्र २ सय ३७ जनाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाएका छन् ! पानीमा डुबेर नेपालीहरुको समेत मृत्यु हुने दर बढ्दै गएकोप्रति सर्वत्र चिन्ता बढ्न…
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ महिला हरु त गर्भवती भएको सुनिन्छ देखिन्छ तर पुरुष ले बच्चा जन्माए भन्दा सबैलाई अचम्म नलाग्ने त कुरै भएन महिला ले बच्चा जन्माउनु त कुनै नौलो कुरा नै भएन तर अस्ट्रेलियामा भने गत एक वर्ष मा २२ जना पुरुष हरु सुत्केरी भएका छन् ! अष्ट्रेलिया’को डिपार्ट’मेन्ट अफ ह्युमन सर्भिस’ले जारी गरेको तथ्यां’क अनुसार गत वर्ष २२ जना पुरुष गर्भ’वती बने र बच्चा’समेत जन्माए । अष्ट्रेलियामा त्यसरी बच्चा जन्माउने पुरुषहरु समलिंगी पुरुष रहेको पनि बताइएको छ ।तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा यसरी बच्चा जन्माउने ट्रान्सजेन्डर अष्ट्रेलियाली…